भ्रष्ट्रचार, कमिशनखोर, कालोबजारिया मुक्त गर्ने नेकपाको अभियानमा राज्यले सघाउनुपर्छ : प्रकाण्ड::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | शनि, माघ २०, २०७४
एकिकृत जनजनगरण अभियानमा के गर्दैछ नेकपा ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले देशव्यापीरुपमा सुरु गरेको तीन महिने एकीकृत जनजागरण तथा भण्डाफोर अभियान, पार्टीको केन्द्रीय समितिका निर्णय र समसामयिक राजनीतिक विषयमा पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)सँग गरिएको विषेश कुराकानीको सम्पादित अंश ।
अहिलेका गठबन्धन वाम नै होइन । २१ औ सताब्दीमा साम्राज्यवादको क्यारेक्टर उत्तर साम्राज्यवादी बनेर जसरी अगाडि आएको छ, त्यसैबाट सृजना गरिएको एउटा खतरनाक प्रवृत्ति हो यो । यो त मुख्यरुपमा सामाजिक दलाल पूँजीवाद हो ।
अहिलेका सचेत नेपाली नागरिक केहि हदसम्म संसदवादी दलहरु सत्ता र सरकारको भागवण्डामा रुमलिरहेको अवस्थामा देशको अस्तित्वमाथि बढ्दै गएको संकट, भ्रष्टाचार, कमिशन, महँगी, राष्ट्रघात, वैदेशिक हस्तक्षेप, दलालीकरणबारे जानकार छन् । जनताको यहि सचेतनाको विरुद्धमा षडयन्त्र गर्न संसदीय दलको नाम दिएर दलाल–पुँजिपति वर्ग र त्यसका पार्टीहरुले नयाँ नयाँ षडयन्त्र गरिरहेका छन् । नयाँ नयाँ षडयन्त्रको एउटा कडी भनेकै वाम गठबन्धन, कम्युनिष्टको नाममा समाजवाद, सम्वृद्धि र उन्नती जस्ता गुलियो नारा अघि सारेर पाँच वर्षसम्म वाम सरकार बने उलटपुलट भइहाल्छ झैं गरेर जनतामा भ्रम दिइरहेका छन् । यसो गर्नुमा दलाल संसदवादीहरुको चरित्र नै हो । त्यसैले यो चरित्रको भण्डाफोर गर्नु नै क्रान्तिको एउटा मुख्य अभिभारा हो । त्यही काम गर्न एकीकृत जनजागरण अभियान कार्यक्रम शुरु गरेका हौं । भण्डाफोर गर्नुपर्ने कार्यक्रमभित्र केही महत्वपूर्ण विषयहरु छन् ।
पहिलो, एमाले र माओवादीको त गठबन्धन वाम होईन, काग्रेस र एमाले, कांग्रेस र वामगठबन्धन अथवा लोकतान्त्रिक र वाम गठबन्धन दुईवटै एउटा सिक्काको दुई पाटो हो । सिक्का भनेको दलाल पूँजिवादी हो, दलाल पुँजिपति वर्गको सत्ता र त्यसको व्यावस्था । त्यसका दुईवटा पाटा मात्र हुन् । यो कुरा जनतामा राम्ररी बुझाउन जरुरी छ । त्यो कुरा हामी बुझाउँछौं ।
दोस्रो, दलाल–ससंदीय व्यवस्थाले समृद्धि, उन्नती गर्छ कि गर्दैन ? यसले सम्वृद्धि, उन्नती केही पनि कहिल्यै गर्दैन । सत्ता र कुर्सीको निम्ति अझ विदेशी शक्तिहरुका अगाडि थप आत्मासमर्पण गर्छ । विदेशी शक्तिहरुलाई अतिक्रमण र हस्तक्षेपलाई निम्त्याउँछ । आत्मासमर्पण गरेर राष्ट्रघात गर्छ । देशमा भ्रष्टचार, कमिसन, जनविरोधी हर्कतलाई मलजल र सहयोग गर्छ । जसका कारण देश र जनताको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाउने विववशता पैदा गराउँछ ।
त्यसकारण देश र जनतालाई बेफाइदा गर्ने र हितलाई मेटाउने हल्ला र भ्रमबाट जनतालाई मुक्त बनाउन भण्डाफोर कार्यक्रमले ठूलो सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसनिम्ति सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्त र स्वतन्त्र देश र नागरिक हुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसमा संगठित भएर निर्णायक क्राान्तिका लागि आगामी आन्दोलनमा आपूmलाई तयार गर्नुको विकल्प नेपाली जनताका अगाडि अरु छैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउने कोशिस अभियानका क्रममा भरपुर हुन्छ ।
तेस्रो कुरा, जनतालाई संगठित गर्न संगठनात्मक संरचनालाई बलियो बनाउँछौ । संगठनबिना क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले राम्ररी बुझेको छ । त्यो कुरा जनताको घरघरमा पुगेर कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
चौथो, अहिलेका दलाल सत्ताले गरेका राष्ट्रघात, जनताका अधिकार खोसेर गरिएका जनघात र कठिनतम जनजीविकाका विषय असाध्यै जर्जर बनिरहेका छन् । यसलाई भत्काउन पनि नयाँ ढङगले सङघर्ष गर्नका लागि कार्यक्रमसहित जनतालाई आह्वान पनि गर्छौं ।
अहिले मुलुकमा जति भ्रष्ट्रचार, कमिशन, कालोबजारी, आर्थिक अराजकता व्याप्त छ । सम्पूर्ण अराजकता राज्यको संरक्षणमा भइरहेको छ । जस्तैः जो व्यक्तिहरु भ्रष्ट्रचारी छन् । भ्रष्ट्रचार गरिरहेका छन् तिनै पात्र राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा छन् । अनि राज्य भ्रष्टचारी भएन ? पोलिटिकल क्षेत्रमा पनि जुन दल सरकारमा जान्छ तीनै नेताले भ्रष्टाचार गर्छन् । यो त राज्य संरक्षित भ्रष्टचार र सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टचार राज्यबाट भइरहेको छ ।
त्यसैले कामै नगर, जागिर छोड भन्ने या कामै गर्न नसक्ने स्थिति बनाउने प्रक्रियाहरु त होलान्, तर हाम्रो पार्टीको नीति भ्रष्ट्रचारलाई जरैबाट उखेलेर फाल्नु हो । यसको अन्तिम विन्दु नै राज्य सत्ताको अन्त्य हो । राज्यसत्ता नै अन्य गरिदिएपछि भ्रष्ट्रचारी जन्माउने कुरा नै रहँदैन । त्यसका लागि हामीले अहिले चरणवद्ध पहल अगाडि बढाइरहेका छौ ।
सतही रुपमा भ्रष्ट्रचार छैन भन्ने महसुस भएको मात्रै हो तर उत्तर कोरिया र दक्षिणकोरियालाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो भ्रष्ट्रचार र कमिशनको खेल त्यहाँ भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डलाई नै हेर्दापनि प्रष्ट हुन्छ । तर नेपालमा विश्वका सबै पूँजिवादी राज्यहरुमा भइरहेका भ्रष्ट्रचारलाई यहाँका राज्य र राज्यसञ्चालकले जितेका मात्रै हुन् ।
विश्वमा जहाँ पँुजिवाद छ, त्यहा भ्रष्टचार छ । सामन्तवाद, पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था नै भ्रष्ट्रचारको मूल स्रोत हो । भ्रष्ट्रचार, कमिशन, ठगी, उत्पीडनको स्रोत हो ।
नेपालमा डेमोक्रेट या लेफ्ट भन्नेहरु अब नेपालमा भ्रष्ट्रचारलाई उन्मूलन गर्छाैं भन्छन्, तर व्यावस्था संसदीय सत्ता दलाल पुँजिपति व्यावस्था छ ।
बिशेषगरी ०६२/०६३ तीर आईपुग्दा हाम्रो समाजको विकासक्रमलाई हेर्दा सामन्ती, उत्पीडन र सामन्तशासनबाट मुक्त भएको छ । यो समाज परिवर्तनको, विकासको एउटा पाटो हो ।
सामन्तवादबाट माथि उठ्दा यो समाजको चरित्र वर्गीय र सामाजिक दृष्टिले छुट्टिएको छ । आर्थिक रुपमा हेर्दा मजदुर, किसान, मध्यम वर्ग, राष्ट्रिय पँुजपति वर्ग पनि छ । हाम्रो समाजमा जातीको नाममा, धर्म र क्षेत्रको नामा शासन गर्ने छन् भने अर्को उत्पिडित (महिला , दलित, जनजाति, अल्पसङख्यक समाज पनि छ यो हाम्रो सामाजिक चित्र हो ।
अहिले समाजिक चेतना र उत्पादनको एउटा प्रक्रियाको दृष्टिले विगतको भन्दा अहिले मजदुर, किशान, अल्पसङख्यक जनताको स्तर उठेको छ । विगतमा निकै कमजोर रहेको तल्लो वर्गका जनताको स्तर ०६२/०६३ पछि केहि माथि उठेको छ ।
यस्तै पूँजिपति वर्ग (खासगरी उद्योगी, व्यवसायी) र राष्ट्रको अर्थव्यवस्थाको विकास नभइकन हाम्रो पनि संरक्षण हुँदैन । हाम्रो पनि अस्तित्व रहँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । र, त्यहिअनुसार क्रियाशील पनि छन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक दृष्टिले उत्पिडनमा परेका जनता यति धेरै राजनीतिक सरोकारका आफ्नो मुद्दामा, आफूमाथि भइरहेको उत्पीडनको विरुद्धमा बोल्न, लड्न थालेका छन् । यो अमेरिका पनि यस्तो छैन हाम्रो देशमा मात्रै हो ।
यो हाम्रो समाजको आवश्यकता र चाहना छ । त्यो अनुसारको राजनीतिक परिवर्तन भएन । तर बडो बिडम्वना सामन्तवादको अन्त्य भइसकेपछि नेताहरु जो त्योबेला क्रान्तिको, आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए तीनै नेताको धोकाधडिका कारणले जनता सत्तामा पुग्न सकेन । र दलाल–पुँजिवादी वर्ग आयो । तर म भन्छु यसको नेपालमा वेश नै छैन ।
अहिलेको समाजमा एउटै वर्ग छैन । अर्थात वर्गविहीन भईसकेको छैन । बरु पछिल्लो दिनमा सम्बन्धित वर्ग मजदुर किसान, राष्ट्रिय उद्यमी व्यावसायी उनीहरुमा पनि विश्व राजनीतिमा, विश्व अर्थतन्त्रमा र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले यहाँ पनि असर र प्रभाव पारेको छ । त्यसैले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गर्ने बेला जे थियो त्यो ठाँउमा छैन समाज । नयाँ ठाउमा आएको छ ।
हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने, मध्यम वर्ग एउटा महत्वपूर्ण वर्गको बनेर ह्वात्तै अगाडि आएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा स्थान लिने र प्रभाव जमाउने वर्गकै रुपमा आइसकेको छ । यो कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीले आगामी क्रान्तिका बारेमा सोच्नुपर्छ र अगाडि बढाउनुपर्छ ।
दलाल संसदीय व्इवस्थाका पक्षधरहरु जनतामा जानेबेला एउटा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउछौ, समाजवाद ल्याउँछौं । भ्रष्टचार, कमिसनको उन्मूलन गर्छौं । राष्ट्घातकाविरुद्ध संघर्ष गर्छौं । १९५० यताका असमान सन्धि सम्झौता सबै खारेज गर्छौं भनेर भन्ने नारा दिए । चुनावमा पनि त्यहिखालको परिणम आयो । अब सरकार बनाउने, अघि बढ्ने भनिरहँदा मालिकले हुँदैन भनिदिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यसैकारण मालिकको भ्रम चिर्न अब बन्ने पार्टी वाम पनि हुँदैन, कम्युनिष्ट पनि हुँदैन भनेर केपी ओली नै बोले र त्यही भएरै अनुनय विनय पनि गरेका हुन् । वास्तवमा एमाले र माके मिलेर बन्ने नयाँ पार्टी काम पनि बन्दैन र कम्युनिष्ट पार्टी पनि हुँदैन ।
राजधानीमा दुईवटै वर्ग छ । सुकिलामुकिला सँगै ठूलो सङख्यामा मध्यम वर्ग छ । राष्ट्वादी शक्ति छन् । मजदुर, किसान पनि छन् । यद्यपि राजनीतिक प्रभाव सुकिलामुकिलाको छ । तर परिवर्तन चाहने जनतापनि यहाँ छन् ।
त्यसैले काठमाडाैं या देशका सबै शहरका परिवर्तन चाहने जनताको बीचमा पनि काम गर्न पर्यो र ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरुका बीचमा पनि काम गर्न पर्यो । त्यो कामको तालमेल मिलाउने नीति छ त्यो ढङ्गको व्यावहार पनि अघि बढिरहेको छ ।
शहरमा प्रचण्ड जस्ता मान्छेलाई बिगार्यो जसले हिजो १० वर्षे महान जनयुद्ध हाँकेका थिए । किरणजीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्यो । यता बादल बाबुराम जीहरुलाई पनि बिगार्यो त्यो सँगसँगै हामीलाई पनि बिगार्ने खतरा पनि थियो । जे बिगार्ने षड्यन्त्र भएको थियो र जे बिगार्ने कल्चर थियो त्यसका विरुद्धमा त जेहाद छेडेर आईसक्याैं । त्यसकारण हामीलाई बिगार्ने सम्भवना छैन अब ।
शनि, माघ २०, २०७४ मा प्रकाशित